Maamulka Sare ee Dekeda Berbera oo Amaro kusoo Roggay Shaqaalaha Sigaarka Cabba iyo Albaabka lagaga Reebay Wax kastoo Dab Dhaliya
Saturday June 15, 2019 - 17:18:21 in Wararka by Super Admin
Berbera(Xogreebnews)-Maamulka sare ee Dekeda Berbera, ayaa amaro kusoo roggay shaqaalaha Dekeda iyo sidoo kale cid kasta oo geleysa ama hawlo uga baahan gudaha dekeda Berbera.
Amarkan ayaa ah in aan gudaha Dekeda lala geli karin wax Leetaro, ama Kabriida, iyo sidoo kale inaan lagu Cabi karin gudaha Dekeda Sigaar.
Saaka arooryadii hore, ayaa afaafka Dekeda lagaga reebay, shaqaalaha Aalada Dabku ka dhalan karo, maadaama oo Dayl xagaa ba'ani ka dhacayso Magaalo xeebeda Berbera, isla markaana loo baahan yahay taxader dheerada oo ka dhan ah Dabka iyo wixii sababi karaaba.
Amarkan ayaa fulay isla Maanta, waxana albaabka laga gelo dekeda lagaga ururiyey shaqalaaha alaadaha dabka dhaliya iyo Sigaarka.
Amarkan ayaa daba socda, kadib Dab xoogan oo saaka qabsaday Meherado ku yaala Magaalada Berbera.